Ihe omuma: Akụkọ ihu n'ihu na Nchedo weebụ
Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ịmụta site n'afọ 2016, bụ otu ha ga-esi chebe onwe hasite hacker intrusion. N'ịchọ ka ị mata, Frank Abagnale, nke Ọkachamara Onye Ọrụ Nchịkọta Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Kasị Elu, achịkọtawo akụkọ asaa kachasị elu nke mepụtara n'afọ a.
1. Dropbox mbanye anataghị ikike
Otu mwakpo nke mmasị karịsịa bụ Dropbox mbanye anataghị ikike, nke nwere mmetụta dị ịrịba ama nandị ọrụ ya. O mere ka mgbasa ozi buru ibu na oke mgbasa ozi dịka e nwere ọtụtụ nde nde ihe ndekọ nke ndị ọrụ. Ọ bụ ihe merenụmkpa dị oke mkpa maka ndị mmadụ iji okwu mkpanaka siri ike ma dị iche iche, na mgbasa ozi iji hụ na ụlọ ọrụ na-enye ndị dị otú ahụ ihe dị otú a chọrọ - wedding fascinators for guests.
Dyn bụ onye nchịkọta DNS nke dabara na October 21 na 2016. E mere yaMirai botnet na-arụ ọrụ na IoT ngwaọrụ nke dugara na ebe nrụọrụ weebụ kachasị. Ọ bụ ihe nzuzo na hackers lekwasịrị IoT ngwaọrụn'ihi otutu otutu ha. Ka o sina dị, otu ihe ndị ọkachamara mụtara site na nke a bụ otú IoT na-adịghị ize ndụ nwere ike ịbụ mgbe ị banyereaka aka.
3. Iwu UK Powers Powers Act
UK meriri otu n'ime ego ha kacha arụ ụka, Iwu Nchọpụta Nchọpụta, naeme ka ọtụtụ ndị nyochaa na aha nke iyi ọha egwu na ime ka nchekwa dịkwuo elu. Ndị isi nke ụlọ ọrụ ugbu a nwere ohere ịnweta ndekọ ndị ọrụna-enweghị mkpa akwụkwọ ikike, ebe ha na-anọgide na-adịghị emebi na usoro maka ọnwa iri na abụọ. Esemokwu ahụ kwalitere arụmụka banyere ego nchịkwa gọọmentịna ọtùtù..Ha na-ajụkwa ajụjụ banyere ókè akara aka na-aga dị ka ihe gbasara nzuzo.
4. The Bitfinex mbanye anataghị ikike
Cryptocurrency malitere ịnweta nchedo nchebe nchebe mgbe ndị mbanye anataghị ikike ga-abanyeOzi Bitfinex. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ kwụghachiri ndị ọrụ ya, ndị mmadụ maliteghachiri nyochaa mkpebi itinye ego na Bitcoins ebe ọ bụ na ụdị dị otú ahụnke mgbanwe na-enweghị ike na-enye ụgwọ. Isi okwu a abughi n'osisi ma mana ndi ochichi na anoghi n'ulo obaechiche nke iji bitcoins dị ka ụzọ nke mgbanwe ego na 2017.
5. Ejiri Ejiri Ejiri Eme Ihe
Dirty COW Exploit bụ ngwanrọ na kernel Linux nke na-enye ndị na-agba ọsọ ohere inwetannyefe nchịkwa na kọmputa maka ọ dịkarịa ala sekọnd ise. Linus Torvalds kọrọ na ha maara nke ọma na ọ dịnwara idozi ya afọ iri gara aga. Ọ na-eje ozi dị ka ihe atụ nke usoro nchịkọta oge ochie dịka egwu dị egwu n'oge aụwa dijitalụ, kwadoro nlekota nlekota nke nchekwa usoro.
Afọ 2016 hụrụ mmụba na ọgụ ransomware. Ha zubere icheòtù, na-enye ihe doro anya na-egosi na ọ dịghị onye ọ bụla na-enweghị ihe mgbapụta ransomware. Ịmata banyere mgbochi, na nchekwabụ ụfọdụ ụzọ ị ga-esi gbochie ndị ọrụ si ransomware n'ọdịnihu.
7. Nsogbu Ukwu Cyber ​​Ukwu DARPA
Ihe Ịgba Aka Ukwu Cyber ​​na DARPA bu iji kpalie ndị ọrụ na usoro nchịkọta na nlekotansogbu. Ihe ịma aka ndị a nwere mmekọrịta mmadụ ole na ole dịka ha na-ejikarị arụ ọrụ
Ọdịnihu nke Nche Systems na 2017
Ọ dịghị ihe na-egosi ihe mere na 2017. Otú ọ dị, ndị na-agba ọsọ na-anọgide na-ele anya makandị ọzọ dị mma. Ndị na-agba ọsọ nwere ike ịmalite ịwakpo ha iji lekwasị anya na netwọk Tor, na ihe ndị ọzọ na-eji arụmọrụ karịana ya. Ihe dị mma bụ na n'etiti ihe ole na ole na-amalite na 2017, ọ bụ nchedo nche.